IsiDanga seMasters simahla sooTitshala 2022
Apha, uya kufumana iinkcukacha ezigcweleyo zokufumana isidanga semasters simahla sootitshala esinokunikwa kwi-Intanethi nangaphandle kwesitifiketi esisemthethweni apho abaxhamli banokujonga khona imisebenzi kwicandelo lezemfundo okanye ngezinye iinjongo zomthetho.
Njengotitshala, ukufumana isidanga senkosi kungakufumana ngokulula umsebenzi ohlawula kakhulu, kwaye nokuba sele ufumene umsebenzi wokufundisa kunye nezinye izidanga inkosi inokukufumana kunyuselo olukhulu. Iya kukuzuzela imbeko kubahlobo bakho, koogxa bakho nakwabafundi.
Njengomnini wesidanga se-master, uzuze isidanga ngokusebenza kwakho nzima kwaye uzixhobisa ngolwazi oluphambili. Oku ngokuzenzekelayo kukwenze wakulungela ukudlulisela ulwazi kwabanye, ngenxa yolwazi lwakho oluphambili.
Njengotitshala, kukho izibonelelo ezingapheliyo eziza nokuba nesidanga se-master kwipotifoliyo yakho yezifundo kwaye kuyinjongo yootitshala abangabaniniyo okwangoku. Kwaye ngeenkosi onazo sele uqalile uhambo lokufumana isidanga sobugqirha.
Ke ukuba ungutitshala onqwenelayo, ukufumana inkosi kuya kwenza ukuba uhambo lwakho lube lula kwaye lube luncedo kwaye unokufumana ugqirha ngokulula. Imfundo ye-masters ithatha iminyaka eyi-2-3 ukugqiba ngokuxhomekeke kwindawo yokufunda kodwa kuhlala kubiza.
Uluhlu lwemirhumo yokufunda ngokufumana uluhlu lwenkosi ukusuka kwi- $ 30,000- $ 150,000 ngonyaka eyahluka ngeyunivesithi / ikholeji kunye nenkqubo yokufunda. Esi sixa asibandakanyi indawo yokuhlala, iindleko zokuhlala, njl.
Kungabiza kodwa kufanelekile, kodwa ukunceda abo bafuna ukuba ngootitshala abangakwaziyo ukufumana i-MA kukho uninzi lwasimahla abanokufaka isicelo kulo. Thina kwiZizwe eziManyeneyo eziFundayo siyibambile kwaye siye senza uphando olunzulu, olunzulu ngezifundo zesidanga semasters kootitshala.
Kwaye ngaloo nto, senze udibaniso lwazo zonke iidigri zemasters zasimahla zootitshala ezifundiswayo kwi-Intanethi nakwisikolo esiqhelekileyo (ngaphandle kweintanethi). Nangona kunjalo, ezi nkqubo zinqabile ngokwenyani zizenza zibe mbalwa ngamanani kodwa ungasoloko uzijoyina ukuba zibamba umdla wakho.
Kungenxa yeenkqubo ezinje apho unokufumana isatifikethi sokufundisa kwi-Intanethi ngaphandle kwentlawulo ngaphandle kokuba kuya kufuneka uhlawule imali yokubhalisa kunye neemviwo.
Zeziphi iinkosi ekufuneka ndizifumene njengomfundisi-ntsapho?
Kulungile ukuba ufuna ukufumana inkosi njengotitshala, iya kukuqesha, ufumane umvuzo, kunye nokunyuselwa. Kodwa iinkosi ozifumana njengotitshala zibalulekile, kwaye awungekhe uqhubeke nokufumana iinkosi kulo naliphi na icandelo lokufunda. Sele uyenzile loo nto kwinkqubo yakho yesidanga sokuqala.
Ngoku, kuya kufuneka ufumane iinkosi ezizokufanelekela ukuba ngumfundisi-ntsapho, kwaye izidanga zeenkosi zootitshala zezi;
IiMasters kwiMfundo eKhethekileyo
IiMasters kuLawulo lweSikolo
IiMasters kuPhuhliso lweKharityhulamu
IiMasters kwiMfundo yaBadala
IiMasters kwiNgcebiso ngeSikolo
Masters kwiMfundo yesiNgesi
IiMasters kwiMathematics Education
Imfundo yabantwana abaselula
Ezi ziinkosi onokuzifumana njengotitshala ukuze uphucule umgangatho wokufundisa kwakho kunye nendlela abanokuxhamla ngayo abafundi kuwe.
Ndingasifumana njani isidanga senkosi mahala?
Kukho iindlela ezahlukeneyo onokuzifundela isidanga senkosi mahala kwaye ngeli xesha lalo naliphi na icandelo lokufunda hayi ukufundisa nje. Ukuba ufuna ukufumana inkosi ekufundiseni unokulandela ezi ndlela zingezantsi.
1. Uncedo lwezeMali
Uninzi lwezikolo zibonelela ngoncedo lwezezimali kubafundi bazo abakwimo yeebhasari, yokufunda kunye nobudlelane. Olu ncedo lwezezimali lujolise kubafundi abaneziphumo ezigqwesileyo kwizifundo (amabhaso asekwe kumgangatho ofanelekileyo) kunye / okanye abafundi abavela kwimvelaphi ehlwempuzekileyo (ibhaso elisekwe kwiimfuno).
Ezi nkxaso-mali, ubudlelwane, kunye neebhasari zinokubonelelwa ngurhulumente, iziko, imibutho yesisa, kunye nealumni yesikolo esithile. Uncedo lwezezimali lunokuza luxhaswe ngokupheleleyo okanye luxhaswe ngemali-mali kodwa nayiphi na into onokuyifumana iya kunceda ukuxhasa ngemali imfundo yenkosi yakho.
2. Sebenzela iYunivesithi okanye iKholeji
Ezinye iiyunivesithi kunye neekholeji zibonelela uxolelo lwezifundo kubasebenzi, ungalisebenzisa eli thuba ukuze uzuze. Kuba ufuna ukulandela isidanga senkosi oko kuthetha ukuba sele unesidanga se-bachelor, kwaye ngayo, sele unayo into oza kuyinikela esikolweni.
Ngedigri yakho ye-bachelor, ungasebenzela isikolo kwindawo apho ulwazi lwakho lufuneka khona, kwaye ngelixa usebenza, unokulandela isidanga senkosi yakho ekufundiseni ngaxeshanye. Oko kukuthi ukuba isikolo sibonelela ngokuxolelwa kwabafundi, kwaye olo luphando kuya kufuneka uyenze ngokwakho.
3. Imali-mboleko yoMfundi
Imali mboleko yenze uninzi lwabafundi abaphumeleleyo ukufezekisa amaphupha abo, jonga indawo zokubolekisa ezinenqanaba eliphantsi lenzala okanye ezenzelwe ngokukodwa ukubolekisa abafundi. Ukusekwa kwezi ntlobo kunamaqondo enzala asezantsi kwaye ungaqala ukuhlawula ngepesenti ekuvunyelwene ngayo emva kokuba uphumelele kwaye uqalile ukusebenza.
Isenokungabi simahla ngokwahlukeneyo, kodwa iyasebenza kwaye ngelixa ungumfundi awuyi kuzikhathaza ngezemali njengoko benokuboleka konke okudingayo kude kube sekupheleni kwenkqubo yakho.
Ezi ndlela sizinike apha ngasentla zinokukunceda ufundele isidanga senkosi yokufundisa simahla, kufuneka ulandele nje iimfuno, ubufundi ngokukodwa, kwaye unokufumana isidanga sokufundisa ngexabiso le-zero okanye isiqingatha seendleko.
Kwakhona, ngaphambili sikhuphe uluhlu lweenkqubo zesidanga se-masters simahla apho abafundi abaphumeleleyo abanokuthatha khona ithuba. Ezi nkqubo zombini zezabahlohli kunye nezabafundi abakwamanye amacandelo afana noMculo et al.
Ngazo zonke ezi zinto engqondweni, kuya kufuneka uskrolele phambili ukuze ubone uluhlu oluhlanganisiweyo lwesidanga semasters simahla sootitshala esikudibanisileyo kwiZizwe ngezizwe.
Sikwazile ukufumana isidanga esinye semasters simahla kootitshala kwaye apha ngezantsi ziinkcukacha zenkqubo kunye nendlela onokufaka ngayo isicelo;
UMphathi wezeMfundo kwi-Degree yokuFundisa okuPhambili
Le nkqubo, i-Master of Education kwi-Advanced Teaching Degree, ibonelelwa yiYunivesithi yaBantu (UoPeople) kunye ne-International Baccalaureate (IB), eyilelwe ukwandisa inani labafundisi abanezakhono kwihlabathi liphela.
UMnu. Inkqubo ibonelelwa nge-100% kwi-intanethi kwaye iya kuxhobisa ootitshala ngolwazi olubanzi lwekharityhulamu, ukufundisa, kunye novavanyo ukuxhasa uphando olukhokelwa ngabafundi, ukucinga nzulu, kunye nokufunda phakathi kwezifundo ezahlukeneyo.
IYunivesithi yaBantu yeyunivesithi yasimahla ekwi-intanethi kodwa ine-M.Ed. Inkqubo eya kufundiswa ootitshala. Izidingo zenkqubo yinqanaba le-bachelor's kunye nobuchule besiNgesi, zalisa isicelo se-Intanethi kwaye uhlawule umrhumo wesicelo se- $ 60.
Emva kokuhlangabezana nazo zonke iimfuno ungaqala i-M.Ed yakho. Inkqubo kwangoko.
Faka isicelo seNkqubo
Njengoko benditshilo ngaphambili, azikho zininzi kwezi nkqubo kodwa ezimbalwa zidweliswe apha ziyi-100% esebenzayo. Ungaqhubeka nokulandela iindlela endizidwelise apha ngasentla zokufunda simahla kwaye isebenza kokubini kufundisiso lwe-Intanethi okanye olungaxhunyiwe kwi-intanethi.
Ngedigri yemfundo, unokufumana unyuselo olukufaneleyo okanye usebenze kwisikolo okhe wafuna njalo. Zonke izikolo zamkela ootitshala abane-MA kwaye nawe awuyi kukhululwa.
I-9 yeeNyuvesi ze-Intanethi eziPhambili kwi-USA
Izifundo zasimahla zeDigree Bible Degree
I-12 yeeScholarship eziphezulu kwi-UAE yoMfundi waseIndiya
I-22 iYunivesithi yaseToronto yasimahla kwaye ihlawulwe iikhosi ezikwi-Intanethi
Ixabisa malini idigri yokufundisa? Fumana apha
isatifikethi simahla sootitshalaisidanga sasimahla sootitshalaIsidanga semasters simahla sootitshalaisatifikethi sokufundisa ekwi-intanethi simahlauqeqesho lootitshala
Post Previous:Izidingo zeYunivesithi yaseLakehead | Imirhumo, iiNkqubo, iScholarship, iZikhundla
Okulandelayo Post:Izikolo eziPhakamileyo ezi-13 eCanada
Arachchige Malithika Samanalee De Silva uthi:
Novemba 1, 2021 kwi-3: 16 pm
Ndinesidanga sokuqala. Ndenza isidanga sam seDiploma yeMfundo. Ndiyathanda ukwenza isidanga sokuqala. Kodwa ndiyanerd skme inkxaso yemali. Ke ndiyathemba ukuba umbutho wakho ungandinika ithuba lokugqibezela iphupha lam. Enkosi
Oneneke Basil Chinedu uthi:
Oktobha 14, 2021 kwi-2: 56 am
Igama lam ndingu-ONYENEKE BASIL CHINEDU, waseNigeria. Ndingumnikazi wesidanga se-bachelor kwaye ndinomdla wokwenyani wokuqhubela phambili isidanga seemasters kwi-intanethi.
Owona mceli mngeni mkhulu kukuba andinayo imali yokuhamba nam. Ndicela nindicebise ngamanyathelo ekufuneka ndiwathathe ukwenza eli phupha libe yinyani.